Home Somali News Turkey: Guddoomiye Cirro oo Kulan La Yeeshay Madaxweynaha Somalia iyo Ujeedada Kulankooda
Dawladda Turkiga, ayaa dalkeeda ku mari-qaaday madaxweyaha Soomaaliya Md. Xasan Sheekh Maxamed iyo Guddoomiyaha Golaha Wakiillada Jamhuuriyadda Somaliland, ahna hoggaamiyaha xisbiga WADDANI Md. Cabdiraxmaan Maxamed Cabdillaahi (Cirro), kuwaasoo qayb ka ah masuuliyiin iyo madax badan oo ka qaybgala xus ballaadhan oo dalkaas ka dhacaya Jimcaha maanta iyo Sabtida berri.
Sida warbaahinta dalka Turkigu baahisay in ka badan madaxweyneyaasha 20 dal oo caalamka ah, guddoomiyeyaal baarlamaan oo Guddoomiyaha Golaha Wakiillada Somaliland ka mid yahay, wasiirro, diblomaasiyiin iyo madax sare oo ka socda dalalka adduunka, ayaa ka qayb-galaya xuska sannad-guurada 100-aad ee ka soo wareegtay dagaalkii koowaad ee adduunka oo Turkigu qayb ka ahaa, iyadoo xuskaasi socon doono muddo laba maalmood ah oo kala Jimcaha iyo Sabtida.
Hasayeeshee, sida xogo kala duwan oo laga helay dalka Turkigu iftiimiyeen madaxweynaha Soomaaliya Md. Xasan Sheekh Maxamed iyo Guddoomiyaha Golaha Wakiillada Md. Cabdiraxmaan Maxamed Cabdillaahi (Cirro), ayaa la dejiyey hudheel qudha, waxayna dawladda Turkigu dejiyey in labadaas masuul ka wadahadlaan arrimaha Somaliland iyo Soomaaliya oo muddooyinkii u dambeeyey madmadaw ku jiray, taasoo sababtay in la hakiyo wadahadalkii labadaas dal u dhexeeyey.
Sida xoguhu tibaaxeen madaxweyne Xasan Sheekh Maxamed iyo Guddoomiyaha Golaha Wakiillada Somaliland, ayaa yeeshay kulan lagaga hadlay arrimo siyaasadeed oo aan ilaa hadda xog rasmi ah laga hayn ujeedooyinka ay xambaarsan yihiin iyo sidoo kale sababta keentay in guddoomiye Cirro la kulmo madaxweynaha Soomaaliya xilligan xaasaasiga ah.
Ilo-wareedyo kala duwan ayaa u xaqiijiyey Jamhuuriya xalay in aanay dawladda Somaliland wax war ah ka hayn kulanka dhexmaray Guddoomiyaha WADDANI iyo madaxweynaha Soomaaliya, arrintaasoo laga muujiyey shaki xooggan oo muujiyey in kulankaasi khatar ku yahay qarannimada Jamhuuriyadda Somaliland.
Somaliland: Wasiir Cadami Oo Ka Hadlay Baaqii Beesha Caalamku Ka Soo Saartay Dib U Dhigista Doorashada.